Rasaasa News – Shirkada PetroTrans oo ku Hawlan Halkii ay ka Dhoofin Lahayd Gaska Gabalka Ogaden
Shirkada PetroTrans oo ku Hawlan Halkii ay ka Dhoofin Lahayd Gaska Gabalka Ogaden
on January 8, 2012 3:45 pm
Nairobi, January 08, 2012 [ras] – Shirkada shidaalka Shiinaha PetroTrans ee saldhigeedu yahay Hong Kong oo ku hawlan halkii ay marin lahayd Gaska laga soo saarayo gabalka Ogaden ee dalka Ethiopia.
PetronTrans oo hore baadhid ugaa waday gabalada Ogaden iyo Gambella galisayna kharaj dhan 350 milyan ayaa ka baxday, ka dib kolkii ay heshay digniin xag amaanka ah.
Mudo ka dib ka bixitaankii PetronTrans ee gabalka Ogaden, waxay dawlada Ethiopia qabtay tartan qandaraas lagu qodaya Gaska Ogaden, waxaana ku guulaysatay qandaraaska shirkada PetronTrsan.
Dawlada Ethiopia iyo shirkada PetroTrans, waxay heshiis ku kala saxiixdeen Addis Ababa July 22, 2011, heshiiska ka dib PetronTrans waxay bixisay lacag horumarina oo xoog leh. Shirkadu wixii xiligaas ka dambeeyey waxay xoog ugu hawlanayd helitaanka dekad ay ka dhoofiso Gaska.
August 23, 2011, Pakin waxaa ka dhacay heshiis saddex geesood ah oo dhax maray Ethiopia, Shiinaha iyo maamul gabaleedka Somaliland, kaas oo arimo badan laggaga wadahadlay, walow aan kalsooni buuxda lagu qabin dhanka Somaliland.
Waxaad moodaa in heshiiska lala galay maamul gabaleedka Somaliland uu noqday mid u dhaqma sidii laga filayey. Somaliland wali waxay ka tirsan tahay dalka xaajadiisu murugsan tahay, xal loo helo Somaliya mooyee xidhiidh kama suuroobi karo maamulka. Waxaana muuqata in dalalka galbeedku ujeedo dareen hunguri shidaal iyo curyaamin heshiiska Ethiopia iyo Shiinaha ugu riixayan Somaliland ka qayb galka xalka Somaliya.
Jabuuti oo ah dal degan waxaa go,aankeeda leh reer galbeedka, Ethiopiana waxay u babac dhigi wayday kharajka faraha badan ee dekada Jabuuti.
Dalalka galbeedku, waxay in badan isku dayeen in ay taageeraan ONLF, wixii ka dambeeyey weerarkii ay Jabhadu ku qaaday shirkada shidaalka ee Shiinaha 2005. Hadii, ay ONLF raaci lahayd talada Maraykanka Maxamed Cumar Cismaana meesha ka bixi lahaa, gabalka Ogaden waxaa qorshaha ku jirtay in uu la mawqif noqdo Daafuurta Suudaan.
Waxay ONLF ku guul daraysteen in uu hogaanka qabto, ruux ay is fahmi karaan dalalka galbeedka. Dawlada Maraykanku waxay hore ugu sheegtay xubno Siyaasiyiin ONLF ah, in hadii ayna isbadal maamul la iman inta ka horaysay 2009, in ONLF ay gali doonto diiwaanka Argagixisada.
Dawlada Maraykanku wixii ka dambeeyey 2009, waxay badashay mawqifkeedii iyada oo dareentay in ONLF, ayna fulin karin danaha Maraykanka iyo kuweeda midna.
Waxayna doorbiday in ay raadiso dawlad ama urur u fulin kara danaheeda geeska Afrika, kuwaas oo taaka u dhigi kara xidhiidhka horumarinta xoogan ee u dhaxeeya Shiinaha iyo Ethiopia.
Dalalka galbeedku waxay ishortaag dhab ah ku hayaan guud ahaan horumar dhaqaale oo ka dhasha Afrika oo ay keeno dalka Shiinuhu. Tusaale muuqda waxaa u ah biyo xidheenka Abay Ethiopia, oo isbadal dhaqaale oo xoog leh u keeni kara geeska Afrika dalalka galbeedku way hortaagan yihiin.
Waxaa kale oo muuqata in Gaaska gabalka Ogaden dalalka galbeedku isku dayayaan in ay ku curyaaminayaan culays ciidamo ay kaga keenaan dhanka Somaliya. Inkasta oo aan Gaaska gabalka Ogaden la helin wali soo saarid dhab ah iyo wado la mariyo midna, hadana waxaa jira xoogaa soo saar ah oo lagu sifeeyo warshad dalka ah.
Shirkada PetronTrans,waxay garaacday albaabo badan oo ay ka mid tahay dekada Mombaasa iyo heshiis nabadeed oo dhex mara Caasmara iyo Addis Ababa. Nasiib daro wali waxay ku guulaysan la,adahay marin haboon.
Walwalka ugu badan ee wakhti xaadirkan haysta PetronTrans ma aha nabad galiyo xumo, ee waxay la,adahay dekad ay isku halayn karto ama ay faa,iido ka dheelanto oo ay ka hesho geeska Afrika.
Gabalka Ogaden xiligan waxaa ka jirta nabad bilow ah, waxaana uu isfaham wanaagsan oo aan hore gabalka uga dhicin u dhaxeeyaa dawlada Ethiopia iyo dadka Somalida ah ee degan gabalka Ogaden.
Xukuumada Ethiopia maanta ka jirtana, in kasta oo ayna ahayn dimoqraati buuxa, hadana waxaa dalka ka jira maamulo ilaa xad madaxbanaan, oo afkooda wax ku maamula, kuwaas oo kasbaday caloosha dadka reer Ethiopia.
Waxaa kale oo kalsooni dadka reer Ethiopia galinaya horumarka ay dawladu ka samaynayso dhinacyo badan oo nolosha la xidhiidha iyo iyada oo leh hadaf horumarineed oo ay kula tartamayso aduunka intiisa kale.
Waxaa isweydiin mudan intee in la egg ayey dalalka reer galbeedku ka hor istaagi karaan horumarka iyo soo saarka khayraadka ee ay wado xukuumada Ethiopia.